एक युवकले आफ्नै प्रेमिकाको दुई महिने कुकुरको टाउकोमा टोकेपछि...
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् जसबारे हामी जान्न उत्सुक हुन्छौँ । केही यस्तै रोचक घटना अमेरिकामा घटेको थियो ।
अनौठो ! जब एक बच्चाले दुईपटक जन्म लिए
एजेन्सी । आमाको गर्भबाट हरेक बच्चाले एकपटक मात्र जन्म लिने गर्छन् । यदी तपाईलाई कसैले आफ्नी आमाको गर्भबाट एक बच्चाले दुई पटक जन्म लिएको कुरा भन्यो भने तपाईले सहजै पत्याउन सक्नुहुन्न । तर, अमेरिकामा यस्तै चमत्कार भएको छ ।
अदभुत क्षमता भएका एक नेपाली बालक
एजेन्सी । नेपालमा एक यस्ता अद्भुत बालक छन् जो छामेर वा सुधेर कुनै पनि बस्तुबारे बताउन सक्छन् । करिब एक वर्ष अगाडि उनी सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रममा आफ्नो कला देखाएपछि भाइरल भएका थिए ।
हेर्नुहोस् विश्वकै मोटा किशोर आज यस्तो देखिन्छन्
एजेन्सी । विश्वकै मोटा किशोरबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै टिका टिप्पणी भएको थियो । तर, एकाएक उनीबारे चर्चा हुन छोड्यो । इण्डोनेसियाका यी बालक जो १० वर्षका थिए तब उनको शरिरमा ३० वटा स्टोन रहेको थियो ।
११८ वर्षदेखि लगातार बलिरहेको बल्ब
एक यस्ता व्यक्ति जसले अन्तरिक्षबाट हामफाले
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता व्यक्तिहरु रहेका छन् जो नयाँ र अनौठो रेकर्ड बनाउन ललायित हुन्छन् । कोही यस्ता कार्यमा सफल भएका छन् भने कोही बारम्बार असफल भए पनि हार भने मारेका छैनन् ।
राधा चरित्र !
एजेन्सी । राधा जसलाई राधीका, राधे, अदी नामले पनि चिनिन्छ भगवान श्री कृष्णकी बाल्यकालकी सखा थिईन् भगवान श्रीकृष्णले राधाजीको सँग निकुञ्ज वन र वृन्दावन हजारौ लिला रचाएका थिए।
सुन्दै आश्चर्य लाग्ने ! पढेकै भरमा विश्वविद्यालयले डिग्री प्रदान गरेका जनावरहरु
एजेन्सी । विश्वमा नै मानिसले गरेको प्रगतिको निकै चर्चा गरिन्छ । उनीहरुले पढाइमा राखेको दख्खलतालाई आज पनि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न मानिसले रातदिन एक गरेको खबर देख्न र सुन्न पाइन्छ । तर, शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न मानिससँगै केही जनावरपनि उत्तिकै अब्बल सावित भएको छ ।